Kooxda Shabaabka oo xalay weerar Gaadmaa ku qaaday Ciidamada Kenyaatiga | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Shabaabka oo xalay weerar Gaadmaa ku qaaday Ciidamada Kenyaatiga
Kismaayo (Keydmedia) - Kooxda Shabaabka ayaa xalay saqdii dhexe waxaa ay weerar qorsheysan ay ku qaaday Saldhigyo ciidan oo ay Ciidamada TFG-da iyo kuwa Kenyaatigu ay ku leeyihiin deegaanada Xayo iyo Taabto ee Gobbolka Jubbada, ayadoona uu markii dambe halkaasi ka dhashay dagaal wakhti kooban socday.
Dagaaladaan ayaa waxaa ay kakala dhacay labo jiho oo kala ah dhanka Xayo iyo Taabto oo ay fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Kenyaatiga iyo kuwa Soomaalida, waxaana halkaasi weeraro gaadmo ah oo qorsheysan ku soo qaaday dagaalyahanada Kooxda Shabaabka.
Ilaa hada inta la ogyahay waxaa dagaalka xalay ka dhacay deegaanada Xayo iyo Taabto ku geeriyootay 5 qof oo isugu jiro dhinacyadii dagaalamay, ayadoona tirada dhaawac uu kor u dhaafayo 20 qof oo dhabada dhinac ah.
C//laahi Xasan oo sheegay inuu kamid yahay Saraakiisha TFG-da ee ku sugan deegaanka Taabto ayaa Xafiiska Keydmedia ee Kismaayo u xaqiijiyay in dagaalka xalay ay ku dileen ilaa Afar nin, ayna ku dhaawaceen 20 nin oo ka tirsan ciidamadii soo weeraya ee Shabaabka.
Wakiilka Shabaabka ee gobbolada Jubbooyinka Sheekh Abukar Cali Aadan oo aan isku daynay inaan wax ka waydiino dagaalka xalay dhacay ayaa waxaa uu ka gaabsaday inuu wax faah faahin ah uu ka bixiyo dagaalka, isagoona sheegay in saacadaha soo socda ay Shirjaraa'id ay ka qaban doonaan dagaalka.
Keydmedia.net - Xafiiska Kismaay
Gollaha Wasiiradda RW Rooble oo la ansixiyay
Warar 24 October 2020 12:57
Xukuumadda ayaa waxaa u badan xubnaheeda Wasiiraddii Khayre lasoo shaqeeyay, kuwaasoo taageeray Madaxweyne Farmaajo.
Madaxii maaliyadda Al-Shabaab oo la dilay
Warar 24 October 2020 11:45
Ciidanka Kenya oo sii daayay dad ay afduubteen
Warar 24 October 2020 11:19
Nin da’ ah oo lagu dilay banaanka Masjid
Warar 24 October 2020 10:00